Xildhibaan lagu weeraray Qarax 12 Jan 12, 2013 - 7:30:08 AM
Gaari uu watay Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Nuux oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamankaa Somalia ayaa lagu weeraray Qarax oo wadada dhinaceeda loogu aasay, waxaana ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa.
Afhayeenka Booliiska Somalia Gen. Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa sheegay in miinadu ahayd mid lagu aasay wadada dhinaceeda ayna ka dhacday Xaafad Buulo-xuubeey ee Degmada Wadajir.
Gen. Bariise wuxuu sheegay inaysan jirin khasaare soo gaartay mudanaha isagoo sheegay inay socdaan baaritaano ka dambeeya kuwii weerarkaas bahalnimada ah geystay.
"Laba ka mid ah ilaalada Xildhibaanka ayaa ku dhawacmay Qaraxa midkood xaaladiisa aad ayay u daran tahay, midka kalena wuu iska roon yahay" ayuu yiri Gen. Bariise oo sheegay in sidoo kale Qarax kale uu ka dhacay Degmada Hodan, kaasoo aan la ogeyn khasaare ka dhashay.
Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen laba askari oo dhulka ku dhacay markii uu qaraxu dhacay, kuwaasoo ay halkaas ka qaadeen gadiidka gurmadka deg-dega ah.
Xildhibaankan ayaanay wax khasaare ah kasoo gaarin qaraxaa lagu weeraray gaarigiisa, iyadoo qaraxan uu burburiyay qaybo gaariga ka mid ah, mana jirto ilaa hadda cid sheegatay inay mas'uul ka tahay.
Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia lagu weeraro, iyadoo uusan mudanuhu ka hadlin weerarka maanta lagu qaaday.
Qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada Amniga DF ay wadeen maalmihii lasoo dhaafay howlgalo ay ku sugayaan Amaanka Muqdisho oo tan iyo markii ay ka baxday Al-shabaab ay ka dhacayeen Qaraxyo iyo dilal qorsheysan.
Cudurka Ebolaha sidee lagu kala qaadaa?